Semalt: Ghost Recovery Ghost
Ryan Johnson, manam-pahaizana Semalt , dia manazava fa ny sari-tany ara-nofinofy / referrer dia karazana spam izay mikendry ny kaonty Google Analytics amin'ny tompon'ny tranonkala. Rehefa tsindry ny tompon'ny tranonkala eo amin'ny URL'ny ghost referrer, dia entina mankany amin'ny tranonkala iray hafa izy ireo izay mahatonga ny spammer hahazoany vola avy amin'ny fifamoivoizana maloto. Ny URL Ghost dia nampidirina ao amin'ny fampahalalam-baovao avy amin'ny tompon'ny tranonkala amin'ny alalan'ny fampiasana bots / tranonkala, noho izany, mamela URL sandoka. Ireo mpitsikilo dia mampiasa sehatra voafaritra manokana izay mandefa fampandrenesana mailaka sy tolotra an-tsoratra.
Ahoana ny fomba fiasa ara-tsakafo ara-panahy
Ny fitaovam-pampitam-baova-drakitra Ghost Ghost dia miteraka adihevitra momba ny webmasters mampiasa Google Analytics. Miezaka ny hanaparitaka ny tra-boina na ny tompon'ny tranonkala izy ireo mba hanindry ny rohy ao amin'ny Google Analytics, noho izany, mamangy ny pejiny. Ireo fitsidihana amin'ny Internet ireo dia afaka manamboatra tambajotra azy ireo amin'ny maha-ara-drariny azy ireo. Mahazo fifamoivoizana amin'ny alalan'io fomba io izy ireo, ary izany no fomba ahazoana vola.
Ny Google Analytics dia mirakitra ny URL an'ny URL mifandraika amin'ny tahirin-kevitra momba ny analytics ka rehefa mahita ny data momba ny analytics anao ianao, dia mahazo lisitry ny tranonkala izay mampifandray amin'ny tranonkalanao. Ny tranonkala dia mamorona tranonkala mety ho an'ny dokam-barotra, fivarotana vokatra na fanodinana iray. Manova ny asa amin'ny alàlan'ny fampiasana script ao amin'ny pejin'ny index izay mamadika ny fifamoivoizana rehetra manerantany ao amin'ny tranonkala iray manokana HTML redirect ao amin'ny pejin-tranonkala.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny spam referrer spam dia mampiasa bots amin'ny tompona tranonkala..Ny olona manana tranonkala robots.txt malemy dia mety hianjadian'ny fanafihana ny mpitsikilo spam. Amin'ireo tranga ireo, ireo mpanafika dia mety ho an'ny vokatra avy amin'ny orinasa manokana. Mampiasa fifamoivoizana sandoka amin'ny sehatr'izy ireo izy ireo amin'ny fanantenana hahazo vola amin'ny tranokalanao.
Ahoana ny fiantraikan'ny fitsangatsanganana spam amin'ny olona iray
Ny iray amin'ireo olana goavana amin'ny tranonkala referrer dia ny fampahalalam-baovao sandoka. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny spam referrer dia manimba ny angon-tranonkalan'ny tranonkala. Ohatra, raha manafika ny kaontinao GA ny fitsangatsanganana an-tsokosoko ianao dia mety hanoratra fitohanana sasantsasany izay mety tsy hoeritreretina ao amin'ny dashboard misy anao. Ao anatin'ireo tranga ireo, ny faharetan'ny faharetan'ny tranonkala dia 0 segondra. Ireo mpanafika dia afaka manapa-kevitra ny hampiasa URL sandoka ihany koa mba hampandehanana ny fifamoivoizana bot ao amin'ny sehatra misy anao. Ny vokatra dia ny fahombiazan'ny tranonkala, na ara-teknika na ara-bola.
Rehefa tsindry ny rohy avy amin'ny mailaka mailaka referrer ianao, dia mety alefa mankany amin'ny URL ratsy. Amin'ny tranga hafa dia lasa lasibatry ny fanafihan'ny phishing ny olona tahaka izao. Misy ny tranga izay ahafahan'ny spammers manely ny malware, ny tranaona ary ny viriosy amin'ny mailaka. Esory ny mailaky ny spam rehetra. Ankoatr'izay dia ampiasà mpampiasa mailaka azo antoka toa an'i Google. Avaho ny mialoha ny sary eo amin'ny mailakao. Aza asiana fanalahidy avy amin'ny mailaka mailaka. Azon'izy ireo atao ny mampiditra malware!
Ny mpampiasa aterineto rehetra dia mila miala amin'ny spam referrer. Ity ny fifamoivoizana sandoka avy amin'ny sehatra spam iraisana toa an'i Darodar. Ireo virosy ireo dia mety hitondra fiantraikany ratsy toy ny hosoka amin'ny aterineto. Amin'ny toe-javatra hafa, mahazo fitsidihana amin'ny Internet ny mpitsoa-ponenana izay mamarana ireo angona vohikala. Ity torolalana SEO ity dia misy toro-hevitra sasantsasany hanampy anao handamina spam referrer. Azonao atao koa ny misakana ny mpitsidika tsy handray anjara amin'ny hetsika fanaraha-maso mampidi-doza Source .